नेता, सरकारी अधिकारी र व्यापारीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ : रमेश पौडेल - Himalaya Post
नेता, सरकारी अधिकारी र व्यापारीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ : रमेश पौडेल
Posted by Himalaya Post | ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:१२ |
रमेश पौडेल : सह–संयोजक, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल
युवा संघले आफ्नो पछिल्लो गतिविधि कसरी अघि बढाउँदैछ ?
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय कमिटि निर्माण गरेको छ । हामीले ७७ वटै जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजक तय गरेका छौँ । जिल्ला कमिटिहरु पनि धमाधम एकताको प्रक्रियामा छन् । पालिका र वडा तहका कमिटिहरु पनि निर्माणको क्रममा छन् । केन्द्रीय कमिटिको कार्य विभाजन पनि हामी छिट्टै सिध्याउँछौँ । आयोग र विभागहरु पनि हामी निर्मार्ण गर्छौँ । जसले सिंगो यो आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन्छ ।
अहिले वाइसीएल र युवा संघ संगठन मात्रै मिलेका छन् पनि मन पनि मिलेका हुन् ?
यो मन भन्ने कुरा मिल्दा मिल्दै भत्किने र भकिँदा भत्किँदै मिल्ने किसिमको हुने रहेछ । मैँले अस्ती एउटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ, हामी कम्युनिस्टहरु लड्दा लड्दै मिल्न सक्छौँ र मिल्दा मिल्दै लड्न सक्छौँ । हामी अरुभन्दा अलि फरक छौँ । किनकी हामी मार्क्सवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास राख्छौँ । त्यो भएकाले हामी कहिले भत्किन्छौँ, कहिले जोडिन्छौँ । तर, त्यो विषय वस्तुहरुमा आधारित हुन्छ । तर, पार्टी, देश र जनताको हित विपरित संगनले नराम्रो कतै गर्नै सक्दैन ।
अहिले तपाईंकै मातृ पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारको गतिप्रति युवा संघको दृष्टिकोण के छ ?
अहिले तपाईंले विभिन्न सूचकांकहरु हेर्नुहोस् । विश्व बैँकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छ भन्दैछ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले भारत, चीन, बंगलादेश, पाकस्तिानभन्दा नेपालको स्थिति मजबुत छ भनेर भनिँदैछ । यहाँ पर्यटन ल्याउने कुरा दुनियाँको भन्दा राम्रो छ भनिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर हेर्नुहोस्, त्यो पनि राम्रो छ । यसअघिका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष नेपाली जनताको खुसीको सूचकांक उकालो लागेको छ ।
काठमाडौँको वातावरण र हावाहुरी पहिलेको भन्दा शुद्ध भएको छ भनिन्छ । तथ्याङ्कहरुले विगतका भन्दा सुधार भइरहेको देखाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार पहिलेको भन्दा घटेको भनेर मैँले भनेको होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको छ । सुशासन पहिलेको भन्दा राम्रो छ भनिएको छ । लोकतन्त्र सुध्रिएको छ भनिन्छ । यी सबै तथ्याङ्कहरुबाटै भन्न सकिन्छ कि सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ । सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने कांग्रेसको नाराले पनि हावा खाएको छ । तर, यहाँ तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाएर केही मानिसहरुको मष्तिष्कमा विष रोपिएको छ । जसका कारण अस्थिरतामा रमाउनेहरु पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर जुर्मुराइरहेका छन् । यसलाई ठीक पार्नुपर्छ । नत्रभने यिनीहरुले समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेका हामीहरुलाई निराशाको भारी बोकाएर नोक्सान पुर्याउँछन् ।
तर, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरु नै देखिने गरी आलोचनाको पात्र बने । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
तपाईं निर्जीव वस्तुको आलोचना सुन्नुहुन्न । तर, मान्छेको सुन्नुहुन्छ । जीवन्त चीजमा आलोचना हुन्छ, वाद, प्रतिवाद र संवाद हुन्छ । काम गर्दै जाँदा स्वास्थ मिल्दैन । त्यसपछि आलोचना सुरु हुन्छ । सरकारको मन्त्रीले कर तिर भनेर भन्छ । मलाई कर तिर भन्ने भनेर आलोचना हुन्छ । पत्रकारलाई तलब देऊ भन्दा मिडिया मालिक त्योविरुद्ध लाग्छन् । सिण्डिकेट अन्त्य गरौँ भन्दा हामीले लुट्दै आएको खोस्ने ? भनेर भन्ने । तैँले काम किन समयमै सकाइनस भन्दा ठेकेदारले आलोचना सुरु गर्छन् । आलोचना यसरी हुँदैछ, गरिँदैछ । नेपालीमा यस्तो मानसिकता कसरी आयो, कसले नेतृत्व गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन ।
तर, नेताहरुको आचरण र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ त पैदा भइरहेका छन् नि होइन ?
पारदर्शिता एउटा शर्त हो । सुशासन एउटा शर्त हो । सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्र कल्पना बाहिर हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अर्थात् विसं २०४६ सालपछिका सबै मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभिन्न निकायमा बसेका अधिकारी र सरकारी नियुक्ति पाएका मान्छेहरुले कहाँबाट कुन स्रोतले घर बनाए ? कुन स्रोतले गाडी चढिरहेका छन् ? सबैको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरौँ । पारदर्शिता, सुशासन लोकतन्त्रमा जरुरी छ । जवाफदेहिता जरुरी छ । मेरो छोराछोरीको नाना र मेरो छानाको स्रोत के हो ? मैँले चढ्ने गाडी र त्यसको तेलको खर्चको स्रोत के हो ? बिहान बेलुका खाइरहेको चामलको खर्च कहाँबाट जोहो गरेको छु भनेर स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? पारदर्शी हुन किन डराउने ? सबैले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत बताऔँ ।
यसलाई युवासंघले एउटा एजेण्डाका रुपमा उठाउँछ ?
एकदमै । हामी युवाहरु सुशासन चाहन्छौँ । हामी पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहन्छौँ । जनताको शासन व्यवस्था चाहन्छौँ । यसैका लागि जनताले आन्दोलन गरेका हुन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग किन बनाएको हो ? यसले कसैको सम्पत्ति नै खोज्दैन भने किन चाहियो विभाग ? अब चिरफार गरिनुपर्छ । अर्को देशका ठूला शत्रुहरु भनेका कर नतिर्ने व्यापारी हुन् । व्यापारीको आवरणमा तस्करी गर्नेहरुमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले यही कुराहरुमा काम गर्दैछ । त्यसमा हामीले सघाउनु पर्छ ।
Previousडिशहोमले विश्व चर्चित कोरियन गीत तथा सिरिज प्रशारण हुने च्यानल सुरु गर्दै
Nextश्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि स्थगित
‘घाम भर्खर उदाएको हो, बादल लाग्दैमा अस्तायो भन्न मिल्दैन’
संवैधानिक परिषद्को बैठक : तोकिए पाँच आयोगका अध्यक्ष
६ माघ २०७५, आईतवार १८:२३